को VAZ-21124 को अवलोकन। विशेषताहरु र विवरण
पहिलो यात्री कार VAZ-21124 1999 मा वोल्गा सवारीसाधान बोट को विधानसभा लाइन तल आए। यो पाँच-ढोका hatchback एक वर्ग पर्छ। VAZ को बाह्र मोडेल को सम्पूर्ण अवधिमा नै एक, सहज गतिशील र चुस्त कार रूपमा स्थापित भएको छ। र 2000 मा "AvtoVAZ" आफ्नो पुर्खा विपरीत मोडेल 21122. एक सस्ता संस्करण जारी गरेको छ, VAZ (जो एक सानो पहिले गरिएको थियो) "दस", कार ट्रिम मा सवारी गुणस्तर र ठूलो विविधता सुधार भएको थियो। गरेको घरेलू hatchback यस मोडेल नियालेर हेरौं।
VAZ-21124 - व्यवस्थापन सुविधा र आयाम
पालकी मोडेल विपरीत 2110 स्वतः शरीर छोटो छ, 4.17 मीटर को एक लम्बाइ। कारण मिसिन को छोटो आधार "दस" भन्दा, थप चुस्त संकुचित र maneuverable भएको छ। नयाँ कार आफ्नो - खेल - अक्षर। साथै, यसको कम्प्याक्ट आयाम धन्यवाद, यो सजिलो पार्क छ, र "मृत क्षेत्र" एकदम कम थियो।
बाह्रौँ VAZ मोडेल धेरै पक्षहरूमा मा दशौं र एघारौँ मोडेल मिल्दोजुल्दो छ। यो मुख्य रूप अगाडि facing सम्बन्धित छ। भित्र, सबै एउटै ड्यासबोर्ड, को "दसौं", तर सिट पछाडि पङ्क्ति को कि स्पष्ट गाडी देखि उधारो थियो। Hatchback LADA-2110 को सबै सकारात्मक गुणहरू छन्। ईन्जिनियरहरु रूपमा यसको predecessors सम्बन्धित सम्भव कमजोरीको रूपमा धेरै हटाउन प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ। र तिनीहरूले सफल - कार रूसी बजार मा सबै भन्दा बिक्री मोडेल भएको छ। सोही, यो यसको सानो लेआउट बावजुद कि टिप्पण लायक छ शरीर को, कार 400 लिटर एक बुट मात्रा छ। यस्तो ठूलो मात्रा पछिल्लो सीट पङ्क्ति तह द्वारा हासिल गर्न सकिन्छ। पर्याप्त केवल एक सीट पल्टिने, तपाईं केही सूक्ष्म वजन (दुई-मीटर पाइप) ले आवश्यक भएमा - र आवश्यक सबै चालक सीट राखे छैन।
VAZ-21124 - अत्यधिक तापमान मा सञ्चालन विशेषताहरु
हामी आश्वासन विकासकर्ताहरूले, सबै घटक र सम्मेलन (ताप सहित) मिसिन मा पनि 45 को एक तापमान मा भनेर डिजाइन रूपमा डिग्री सेल्सियस यसलाई गरम करना गर्दैन। र माइनस 40 पछि भने, छ एक hatchback कुनै पनि समस्या बिना सक्षम हुनेछ। र पनि harshest जाडो चालक र आफ्नो यात्रु न्यानो रहन हुनेछ - ताप सिस्टम +20 डिग्री सेल्सियस गर्न भित्री heats। सम्पूर्ण प्रकाश पूर्ण काम गर्नेछ।
एक कार को मुख्य विशेषताहरु को - मिलाउने लागि अवसर। "रगत" यहाँ सबै सम्भव छ - इन्जिन र ट्रिम र, र एक ध्वनि प्रणाली। सामान्य मा, सबै पूरा सन्तुष्टि मोटरहाक्ने व्यक्ति लागि। एक सान्दर्भिक विवरण कुनै पनि मोटर वाहन स्टोर वा बजार पाउन सकिन्छ।
VAZ-21124 - इन्जिन प्रदर्शन
मोडेल दुई पूर्ण , इंजेक्टर इन्जिन चालू 95th पेट्रोल। पहिलो - 1.6 लिटर को vosmiklapanny एकाइ मात्रा र 80 अश्वशक्ति को उत्पादन। दोस्रो - 90 "घोडाहरू" संग र एउटै क्यूबिक क्षमता संग shestnadtsatiklapanny इन्जिन। प्रति घण्टा 185 किलोमिटर - अप के गति तिनीहरूले VAZ-21124 फैलाने गर्न सक्षम छन् गर्न। इन्जिन मर्मत सञ्चालनको मात्र पछि5वर्ष आवश्यक छ। नयाँ वस्तुहरूको मोटर धेरै छिटो र भरपर्दो छ।
VAZ-21124 - आफूलाई लागि विशेषताहरु बोल्न!
"शेल्बी कोबरा": विशेषताहरु, फोटो
रिले उत्तेजित गर्दछ VAZ-2110: स्थान र उद्देश्य। VAZ-2110 को लागि स्पेयर पार्ट्स
को अनुहार स्नायु, लक्षण र उपचार को Paresis
सुँगुर फलाम उत्पादन - इस्पात उद्योग को आधार
यार्न "बाख्रा तल": लेख, समीक्षा
सूजी मिठाई के गरेको छ?